Studio 7 Headlines, Wednesday, August 10, 2016
Several people converged at Africa Unity Square today to press the government to find abducted political activist Itai Dzamara of Occupy Africa Unity Square who disappeared 17 months ago. Patson Dzamara, the brother of Itai, Jestina Mukoko of the Zimbabwe Peace Project, who was once abducted by state security agents, and several other activists said they would stage such protests until the former journalist-cum protest leader is found.
Political activist Linda Masarira who was arrested when Zimbabweans staged nationwide protests last month has been further remanded in custody.
On the diaspora forum this evening we are focusing Zim Selector which is refocusing its brand to suit the current economic situation in Zimbabwe.
And we will give you an update on the Olympic Games in which several Zimbabwean athletes are featuring.
This evening on Livetalk our hosts of Gibbs Dube and Jonga Kandemiiri will be focusing on human rights issues in Zimbabwe as protesters press the state to find abducted political activist Itai Dzamara. Others have castigated army general Constantine Chiwenga for claiming that Zimbabweans are using social media for enhancing a regime change agenda in the country. What are your views on human rights issues in Zimbabwe?